နည်းပညာ « MMWeather Information BLOG
Leaveacomment နည်းပညာ, မိုးရွာသွန်းမှုခန့်မှန်းခြေ, မိုးလေဝသအခြေအနေ, ရေပြင်ညီဖိအား, လေတိုက်ခတ်မှုအခြေအနေ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း NOCK-TEN နှင့် ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မည့် အခြေအနေ
By mmweather.ygn, on July 27th, 2011%
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း NOCK-TEN ဟာ အခု ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကို ဖြတ်ကျော်တိုက်ခတ်လျှက်ရှိပြီးတောင်တရုတ်ပင်လယ်ထဲကို ရောက်ရှိလာတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ NOCK-TEN ရဲ့ လမ်းကြောင်း ကြိုတင်ခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားမှုအရ အခုဇူလိုင်လ-၂၉ ရက်မှာ ဟိုင်နန်ကျွန်းကို တစ်ကြိမ်၊ ဇူလိုင် ၃၁ ရက်နေ့ခန့်မှာ ဗီယက်နန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်း ကမ်းခြေကို တစ်ကြိမ် – ကုန်းတွင်းကို ထပ်မံ ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ဦးမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
အဲသလိုဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်တဲ့ အချိန်တွေကျရင် မြန်မာနိုင်ငံ၊ လာအိုနိုင်ငံနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းတွေကို မုန်တိုင်း အကြွင်းအကျန်များဝင်ရောက်လာပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ရှမ်းပြည်နယ်တစ်ခုလုံး၊ ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ မွန်တနင်္သာရီဒေသတွေမှာ မိုးကြီးမဲ့ အခြေအနေရှိနိုင်ကြောင်း ကြိုတင်ခန့်မှန်း တင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဇူလိုင်လ ၃ဝ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၆ နာရီခွဲ (00:00 UTC) မှာ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း . . . → Read More: တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း NOCK-TEN နှင့် ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မည့် အခြေအနေ
Leaveacomment နည်းပညာ, မုန်တိုင်းသတင်း, မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေ NOCK-TEN, ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်, မုန်တိုင်းသတင်း, မုန်တိုင်းအကြွင်းအကျန်, မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေ GFS003 model အားလေ့လာခြင်း
By mmweather.ygn, on June 25th, 2011%
GFS model 003 ရဲ့ homepage ကို အရင် ဆုံးဖွင့်ကြည့်ဖို့ လင့်ပါ http://weather.uwyo.edu/models/fcst/index.html?MODEL=gfs003
Univesity of Wyoming ရဲ့ အဲဒီ GFS-003 model page ကို ဖွင့်လိုက်ရင် GFS MAP ဆိုတာရဲ့ အောက်မှာ ရွေးချယ်စရာ ၄ ခု –
Initial time Region Forecast နဲ့ Level တို့ ရှိပါတယ် –
အဲဒီမှာ အရင်ဆုံး Initial Time ကတော့ နောက်ဆုံးရတဲ့ အချိန် လက်ရှိပေါ်နေတဲ့ အချိန်ကို ပဲ ရွေးရမှာပါ ပြီးခဲ့တဲ့ အခြေအနေသိချင်ရင်တော့ အောက်က အချိန်တွေထဲက တစ်ခုခုပေါ့ဗျာ . . . → Read More: GFS003 model အားလေ့လာခြင်း
Leaveacomment နည်းပညာ GFS003 model MMW ၏ post အသစ်/အဟောင်းများကို Google Reader ဖြင့် ဖတ်ရှုနိုင်ရန်
By skywatcher, on November 9th, 2010%
MMW ၏ Blog post များကို Goodle Reader တွင် လွယ်ကူမြန်ဆန်စွာဖတ်ရှုနိုင်ရန် လုပ်ဆောင်ပုံ အဆင့်ဆင့်အား ယခု post တွင် ရှင်းလင်းတင်ပြပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်၊ အဆင့်များကို အသေးစိတ်ရှင်းလင်းပြရန် မလိုသည့်အတွက် အလွန်အသေးစိတ်ပြီး ရှင်းလင်းထားခြင်း မရှိပါ။ အခက်အခဲရှိပါက CBOX တွင် တက်ရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Google Reader တွင် MMWEATHER BLOG Post များအားလွယ်ကူမြန်ဆန်စွာဖတ်ရှုနိုင်ရန် အောက်ပါ RSS FEED link အား ကော်ပီကူးယူပါ
ကူးယူပြီးပါက Google Reader ကိုဖွင့်၍ AddaSubscription button (အောက်ပုံတွင် ကြည့်ပါ)ကို နှိပ်ပြီး ကော်ပီကူးယူထားသည့် လင့်ကို paste လုပ်လိုက်ရုံဖြင့် . . . → Read More: MMW ၏ post အသစ်/အဟောင်းများကို Google Reader ဖြင့် ဖတ်ရှုနိုင်ရန်
Leaveacomment နည်းပညာ Google-Reader, Post-subscription Test Your Website
By mmweather.ygn, on September 8th, 2010%
</p> <p>Visit <a href=”http://www.websitepulse.com/help/tools.php” mce_href=”http://www.websitepulse.com/help/tools.php”>WebSitePulse Test Tools page</a></p> <p>
. . . → Read More: Test Your Website
2 comments နည်းပညာ site-test နည်းပညာဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးများပါဝင်ရေးသားပေးပါရန်
By mmweather.ygn, on August 25th, 2010%
ဤ category တွင် နည်းပညာနှင့်ပတ်သက်သည့် သိစရာမှတ်စရာများကို MMW အဖွဲ့ဝင်များမှ ပါဝင်ကူညီရေးသားပေးကြရန်ဖြစ်ပါသည် ….
Leaveacomment နည်းပညာ နည်းပညာ Copyright © 2017 MMWeather Information BLOG Log in - All Rights ReservedPowered by WordPress & the Atahualpa Theme by BytesForAll. Discuss on our WP Forum